Nezvedu - Auautal
Iko kuwanikwa kwemvura yakachena kuri kukurumidza kuve nyaya yekunetseka kukuru pasirese.
Kwemakore anodarika gumi, Global Mvura yanga ichishanda kusangana nezvavanoda zviri kuwedzera kunaka, mvura yakachena kuburikidza nekugadzira, kugadzira uye kushambadza huwandu hwakawanda hwekurapa mvura. Neruzivo rwakazara uye ruzivo rwakakura, Global Mvura yakazvimisikidza semapiyona epasi rese uye vagadziri munzvimbo yemvura. Kupa mhinduro dzakanakisa kune ese mafirita uye kuchenesa mvura zvinodiwa.
Chigadzirwa chedu chinofukidza disenser yemvura, yekuchenesa mvura, RO uye UF masystem, soda inogadzira, ice mugadziri, bhodhoro remvura uye zvirongo zvemvura Kunze kuAmerican, European, South America uye Southeast Asia Misika.Nedzimbahwe muChina, nekudzora matura, kutsvagisa marabhoritari, uye mahofisi ane chekuita neanotungamira muIsrael, South America neUS, takakurumidza kukura kubva pakushandira musika wemuno kuenda kumisika yeAmerica, Europe, Africa neAustralia. Kugadzira uye kugadzirwa kwechigadzirwa kunoitika muChina, uye zvigadzirwa zvinozotumirwa pasirese pasi pezita rekutengeserana rekambani yedu kana OEM uye ODM zvido.
Chiono chekambani yedu ndechekuenderera mberi nekupa zvigadzirwa zvepakutanga, zvinobudirira uye zvinobudirira pamwe nekungogarika mumabasa ekutanga nekutumira. Kuti tikwanise kuona chiono chedu, takaisa mari yakawanda mukutsvaga vashandi vepasi rese pamwe nekudyara kwakawanda kwekuvandudza. Neiyi nzira isu tave tichienderera nekuwedzera mashandiro ayo zvese zviri zviviri kutengeserana uye tekinoroji nekuvandudza kwechigadzirwa uye mhando nyowani dzinoburitswa nguva dzose, zvichiratidza chinangwa chekambani chekuvandudza.
Taura nesu nhasi
Suzhou Puretal Magetsi Co, Ltd.